Blogs Ukushisa | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2005 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Leli sonto bekuyisonto elinzima. Umsebenzi wami muhle futhi ngiyaziswa ontanga yami namakhasimende ami. Ngokokuqala ngqa, noma kunjalo, ngikholelwa ukuthi ibhulogi yami iphazamise ubudlelwane bami bobuchwepheshe. Sengikhulume nabo isikhathi eside, angikholwa ukuthi kukhona ukukhathazeka ngomqashi wami. Abaholi bami bakholelwa ngokuphelele kubhulogi njengokukhuluma okunempilo. Vele, abakwazi ukuthatha umthwalo wemibono yami ngoba ingeyami futhi ayikho eyomunye umuntu. Ngenxa yalokho, uzobona ukuthi angisenaso isixhumanisi nomqashi wami. Kubi kakhulu - ngoba ngiyakuthanda ukubakhuthaza njengomholi embonini yolwazi kanye neyedijithali.
Udaba luphakanyiswe yikhasimende ebelibuye libe ngumqashi wami ngaphambilini. Yize bengingasebenzelanga ngqo noma iyiphi inkampani lapho beqinisa ubudlelwano babo… futhi angishiyelananga, eminye imibuzo yaphakanyiswa yikhasimende mayelana nokuqashwa kwami ​​kanye nezibopho zami ebudlelwaneni babo nomqashi wami wamanje.
Ngikholwa ukuthi udaba luvele ngenxa yokufakiwe okumbalwa ebhulogi engikwenzile okugxeke eminye yemizamo yokumaketha yomqashi wami wangaphambilini. Ngokumangalisayo, nedlanzana labantu elifunde ibhulogi yami… umqashi wami wangaphambilini wayengomunye wabo. Kuyangijabulisa ukuthi bengiyisihloko sengxoxo kuyo yonke inkampani… abangane bami abaningi bangigcwalisile. Amagama ami angishaye kakhulu kangangokuthi ngikholelwa ukuthi asuka emnyangweni engangiwusebenzela, ngokusebenzisa inkampani, umqashi wamanje bese ubuyela kimi! Ngangazi ukuthi iyeza futhi ngiyilungiselele - kepha kwakusesimweni esingathandeki.
Ukubuza isimo se-quo kuhlale kunempilo. Ngenkathi ngisebenza kuleyo nkampani, umphathi ongiqashile wabonwa njengenhlangano ebanzi ngesiqondiso ayesithatha ngaso. Yize besingumnyango omncane, sisebenze ngokuvelele njengeqembu futhi sakwazi ukuletha - kaninginingi futhi kaninginingi. Abangani babelane nami ukuthi abakholelwa ukuthi iqembu elisha libe nempumelelo ebesinayo. Ngicabanga ukuthi yingakho ibhulogi lika-lil ol 'Doug likhuphule ukunuka okunje.
Angizukuvumela noma ngubani ithuba lokuthi akhombe ibhulogi yami njengomthombo wenhlanhla noma ishwa lakhe. Ngikususile okufakwe kubhulogi yami okubangele ukuthi i-ruckus ihlonishwe ngumqashi wami wamanje. Ngisayibambe kakhulu inhlangano engangiyisebenzele. Futhi, ochwepheshe engangisebenza nabo lapho babengengabesibili. Ngisacabanga kakhulu ngomholi owangiqasha futhi waqhubela impumelelo yami lapho. Futhi ngibonga ngisho nokuthi ngiphume ngomnyango ngabaphathi abasha. Ngemuva kwakho konke, ukuhamba kwami ​​kungiholela enkampanini enhle, imboni kanye nesikhundla enginaso manje!
Ngangingeke ngiphawule uma ngangingenandaba. Ngisenamasheya ambalwa esitokisini enhlanganweni engangiyisebenzela. Ngabe umninisitoko angagxeki inkampani abanayo isitoko sayo?
UForbes ubene-athikili enhle, Ukuhlaselwa kwamabhulogi, ngikhuluma ngokuhlaselwa kwamabhulogi alimaza idumela nezinkampani ezilimazayo. Kuyathakazelisa kimi ukuthi ukushicilelwa kungathatha ukuma ngokumelene nenkulumo yamahhala. Uma inhloso yokufaka ibhulogi ukulimaza inkampani isebenzisa amanga noma inkohliso, ngikholelwa ukuthi lokho kungukunyundela. Kepha uma ukungena kwebhulogi kungukugxeka okuthembekile kwenkampani esiya ohlangothini olungafanele… Ngabe lokho kungukunyundela? Angicabangi.
Ngikholwa ukuthi ubuzenzisi, ubukhazikhazi, nokuzenzisa kwe-'Free Press 'evikelwe ngokomthethosisekelo kule nkampani ukulwa nokubhuloga. Ukubhloga kubeka izwi lami ngokuzwakalayo njengokulandelayo futhi kunginikeza izindlela zokuveza ngokukhululeka umbono wami. Cabanga ukuthi ukubhuloga bekungasiza kanjani izwe lethu ekulweleni amalungelo alinganayo abesifazane nabancane! Amazwi abo ebengazwakala futhi avikelwe ngaphandle kokwesaba ukuthi bazophindiselwa. Sengiqala ukukholelwa ukuthi ayikho into exakayo njengoba iRosa Parks ilele eMbusweni kuleli sonto.
Ngingathanda ukuthi ngifunde ibhulogi kaNks Parks!
Tags: blogsamabhulogi ayashisaukubhuloga ezinkampaniamabhulogi ezinkampaniforbes